चन्द्रसूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डाको आडमा बसेर काठमाडौं नियाल्दा (फोटो फिचर) | गृहपृष्ठ
Home Slider चन्द्रसूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डाको आडमा बसेर काठमाडौं नियाल्दा (फोटो फिचर)
on: May 11, 2019 Slider, फोटो फिचर
चन्द्रसूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डाको आडमा बसेर काठमाडौं नियाल्दा (फोटो फिचर)
झण्डा पार्कमा रहेको झण्डासँगै काठमाडौंको मनोरम दृश्य ।
वैशाख २८, काठमाडौं । चारैतिरबाट डाँडैडाँडाले घेरिएको काठमाडौं उपत्यका हेर्न आन्तरिकदेखि बाह्य पर्यटकहरू नगरकोट, फुल्चोकी, चन्द्रागिरी, शिवपुरी लगायतका विभिन्न थुम्कामा पुग्ने गर्छन् । शहरबाट नजिकै अर्को एउटा थुम्का पनि छ, जसको बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौं ।
बतासको बेगसँगै फर्फराइरहेको चन्द्रसूर्य अंकित राष्ट्रिय झण्डाको आडमा बसेर काठमाडौं उपत्यका नियाल्दा बेग्लै आनन्दको अनुभूति हुन्छ । यो ठाउँ हो, काठमाडौं जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ११ स्थित जगडोलको ‘झण्डा पार्क’ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग जोडिएको जगडोलमा शानका साथ उभिएको यो झण्डा फर्फराइरहँदा हामी नेपाली हुनुमा गर्व गर्न अझ प्रेरित गर्दछ ।
झण्डा पार्कबाट उपत्यकाको रात्रिकालीन दृश्य मनमोहक देखिन्छ । यहाँबाट स्वयम्भू, पशुपतिनाथ, बौद्ध लगायत काठमाडौं र भक्तपुरका अधिकांश धार्मिक एवं पूरातात्विक महत्वका क्षेत्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ । यसका साथै बुढानिलकण्ठ नगरपालिकास्थित शिवपुरीको शिर तारेभीर, चन्द्रागिरी लगायतका डाँडाहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । उपत्यका भित्रिने पूर्वी नाका साँगा भञ्ज्याङबाट आउँदै गरेका सवारीसाधन, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, हायात होटल लगायतका संरचना यहाँबाट देख्न सकिन्छ ।
यहाँबाट तारेभीर हाइकिङ रुट छोटो तथा सजिलो पर्दछ । अहिले बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको बुढानिलकण्ठ नगर भित्रको साइकल ट्रेल (साइक्लिङ रुट) वुढानिलकण्ठ मन्दिरबाट शुरु भएर नागी गुम्बा हुँदै यही जगडोल झण्डा पार्कमा अन्त्य हुन्छ । गोकर्णमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शहीद पार्क पनि यहाँबाट नजिकै पर्दछ भने जगडोल गुम्वा, कुलारी गुम्वा, कप्पन गुम्बा र दोर्जो गुम्बा पनि झण्डा पार्क नजिकै छन् ।
नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले यहाँ आएर चामुण्डा मन्दिरमा पुजा गरेको किम्बदन्ती रहेको यहाँका बुढापाका बताउँछन् । पछि उक्त मन्दिरलाई जोरपाटीमा सारिएको स्थानीयको भनाइ छ । यसैगरी पौराणिक रुपमा राबणले यज्ञगरेको पवित्रभूमी ‘यज्ञडोल’ नामबाट अपभ्रंश भएर यो ठाउँको नाम जगडोल रहन गएको किम्बदन्ती पनि सुन्ने गरिन्छ ।
कसरी पुग्ने ‘झण्डा पार्क’ ?
यहाँ पुग्नका लागि चाबहिलबाट महांकाल, आरुबारी, गोकर्ण शहीद पार्क हुँदै करीब ६ किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि झण्डा पार्क पुग्न सकिन्छ । चाबहिलबाट बौद्ध, जोरपाटी, शंखडोल चोक, शहीद पार्क हुँदै पनि यहाँ पुग्न सकिन्छ । यस्तै चाबहिलबाट कपन गुम्बा हुँदै शहीद पार्क निस्किएर पनि यहाँ पुग्न सकिन्छ । यहाँ जानका लागि सार्वजनिक सवारीसाधनबाट गोकर्णको शहीद पार्कसम्म गएर त्यहाँबाट करीब ३० मिनेट पैदल यात्रा गरेपछि झण्डा पार्क पुगिन्छ । निजी सवारीसाधन हुनेका लागि भने त्यहींसम्म सडक सुविधा रहेको छ । बुढानिलकण्ठबाट ट्रेकिङ रुट मार्फत पनि यहाँ पुग्न सकिन्छ ।
बुढानिलकण्ठ र गोकर्णेश्वर नगरपालिका दुबैले जगडोलको झण्डा पार्कलाई महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलको रुपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । यहाँ आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुका लागि सुविधासम्पन्न रिसोर्ट, रेस्टुराँ, कफि शप, चमेना गृह लगायतका व्यापारिक संरचनाहरुको पनि राम्रो व्यवस्था छ ।
प्रस्तुत छ, झण्डा पार्कबाट आर्थिक अभियानका लागि प्रदीपकुमार श्रेष्ठले खिचेका तस्वीरहरू :
झण्डा पार्कबाट देखिएको रात्रिकालीन दृश्य ।
तस्वीरहरु : प्रदीपकुमार श्रेष्ठ/अर्थिक अभियान